Sheldon's second 1998 Ural Sporstman two-wheel-drive sidecar rig | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34128)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10798)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9817)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9356)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (8933)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8525)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7811)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7171)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7038)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6918)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6464)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6101)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5537)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5411)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5187)
နေအိမ် → Ural → Sheldon's second 1998 Ural Sporstman two-wheel-drive sidecar rig
3 ဧပြီ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Sheldon’s second 1998 Ural Sporstman two-wheel-drive sidecar rig
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 6, 2007. A lot has changed since my last posting. Check out my other diaries at:
One can’t even imagine how, after 42 years of riding, not havingabike forawhole summer tore at me. Seeing my friends at rallies was wonderful, but not being able to go riding with them really hurt, and seeing the thousands of bikes that pass my house any weekend day actually brought tears to my eyesafew times. The doctor bills have completely depleted my retirement funds and havingafun car wasalittle bit ofarelief but I really didn’t think that I’d be up onabike again. ဒါပေမဲ့.
Ural Patrol t, ရောင်းမည်, t motorcycle, ပြန်လည်သုံးသပ်, vs gear up, vs patrol motorcycle…
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Sheldon’s Ural Sportsman week one at the North American Russian Motorcycle…
2011 Ural Patrol-T 750 - အသုံးပြုခံ့ 2011 Patrol-T 750 at...
15.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2011 Ural Patrol-T 750 - အသုံးပြုခံ့ 2011 Patrol-T 750 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
ဆန်းစစ်ခြင်း: 2010 Ural Patrol T takesalickin’ a...
12.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဆန်းစစ်ခြင်း: 2010 Ural Patrol T takesalickin’ and keeps on tickin’…
10.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2014 Ural Patrol Review
10.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Luxe Travel Report Barcelona by Sidecar
08.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2014 Ural Solo sT Review Motorcycle 2013
04.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Ural Retro Solo – Classic Bike Guide – RealClassic.co.uk
အသုံးပြုခံ့ 2010 Ural Taiga – reviews, Prices and S...
25.05.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် အသုံးပြုခံ့ 2010 Ural Taiga – reviews, ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာစျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စမတ် eScooter Ducati 60 ဟွန်ဒါ DN-01 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Aprilia Mana 850 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး AN 650 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Diavel ဆူဇူကီး Colleda CO Bajaj Discover Brammo Enertia တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Ducati Desmosedici GP11